PersonalDNA - व्यक्तित्व प्रोफाइल
मंगलवार, नोभेम्बर 28, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
मेरो साथीले व्यक्तित्व परीक्षणलाई तुच्छ ठान्दछ। म तिनीहरूलाई वास्तवमै मन पराउँछु, तर तिनीहरूमा आधारित आधारभूत निर्णयहरू गर्दा धेरै सहज महसुस गर्दिन। मसँग रोजगारदाताहरू छन् जसले परीक्षणको उपयोग टोलीको विकास गर्न र त्यस टोलीका मानिसहरूले उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर बुझ्नको लागि। द्वारा 'आधिकारिक' प्रशिक्षण पाएको विकास आयाम अन्तर्राष्ट्रिय, म व्यक्तित्व परीक्षणहरूको समीक्षा गर्न र उनीहरूलाई कामका सम्बन्धहरू पूर्वनिर्धारण गर्न प्रयोग नगर्न सहज महसुस गर्दछु। जब मैले कम्पनीका लागि काम गरें जहाँ हामीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो, परीक्षणहरू अति उत्तम भयो किनकि उनीहरूले नेतृत्व लिए व्यक्तिगत विकास हामीले अरूसँग कसरी कुराकानी गरेका थियौं।
जब म अघिल्लो नियोक्तामा सरेँ जसले कुनै पनि तालिमका साथ चिन्ता गरेनन् म्यार्स-ब्रिग्स तपाईको बिरूद्ध प्रयोग गरिएको जानकारीको अर्को टुक्रा भएर परीक्षण घाइते भयो। यो प्रबन्धकलाई बहाना बनाउन को लागी सजिलो छ छैन नेतृत्व गर्न को लागी जब तिनीहरू एक व्यक्तित्व परिक्षण लाई अयोगिक रूपमा व्याख्या गर्न सक्दछन्। यो एउटा उपकरणको सट्टा एक बैसाखीमा परिणत हुन्छ। डाटा नबुझ्दा डाटा नहुनु भन्दा खराब निर्णयहरू निम्त्याउन सक्छ। हामी यो अधिक र अधिक मतदान, खराब विकसित सर्वेक्षणहरू, नराम्रो फोकस समूहहरू, र कमजोर विश्लेषणको साथ देख्छौं। व्यक्तित्व परीक्षण फरक छैन। तपाईंमा प्रबन्धक वा सुपरवाइजरको शीर्षक राख्नुको मतलब यो होइन कि तपाईंलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने वा निरीक्षण गर्ने भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ, र निश्चित रूपमा यसको मतलब यो होइन कि तपाईं उनीहरूको काम गर्ने तरिका बदल्न कसैको व्यक्तित्व परीक्षणको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले मलाई लाग्छ कि मेरो साथीले तिनीहरूलाई घृणा गर्दछ ... र म त्यसलाई दोष दिदिन। यो तपाइँ जस्तो शल्य गर्न को लागी एक जीव विज्ञान पुस्तक उठाएको जस्तै हुनेछ, के तपाइँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्दैन।
त्योले भन्यो, मलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रस्तुतीमा आधारित पर्सनलडीएनएको रिपोर्ट र उनीहरूको टिप्पणीहरू मनपर्‍यो। तपाईंको उत्तरहरू चयन गर्नका लागि नियन्त्रणहरू धेरै सहज थिए, म तिनीहरूको अनुप्रयोगको उपयोगिताबाट प्रभावित छु। साथै, समाप्त रिपोर्ट सही थियो र सबै भन्दा धेरै सकारात्मक। तपाईको तस्वीर कोर्नको लागि पर्याप्त जानकारी थियो, तर त्यत्ति धेरै थिएन कि कोहीले तपाईको बिरूद्ध जानकारी राख्न सक्छ। चेक आउट गर्नुहोस्
मेरो व्यक्तिगत Dna रिपोर्ट आफैलाई हेर्न।
एनिमेटेड नेता… मलाई त्यो मन पर्यो!
Scion - के यो मार्केटिंगको नयाँ मोडल हो?